Marvel wuxuu xaqiijiyay soo noqoshada halyeey dhintay, xalinta mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu dambeeyay Endgame - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Marvel wuxuu xaqiijiyay soo noqoshada halyeey dhintay, xalinta mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ugu dambeeyay Endgame - BGR
Rakaabka: Dhamaan waa filimka ugu weyn sanadka. Tani waa dhacdo aad u weyn oo loogu talagalay adduunka Marine Cinematic adduunka oo aan lahayn cid la tartanta. Filimku wuxuu ka buuxsamay ukun la yaab leh oo Easter ah oo taageerayaasha MCU runtii ku raaxeystaan, sheekada dhakhsaha badan ayaa xiiso u leh in la raaco, in kasta oo munaasabado kaladuwan ay soo jiiteen taageerayaasha.
Qisada filimku ma ahan godad buuxa, wax walbana waa la sharixi karaa - waxaana baarnay khilaafyo kala duwan oo soo ifbaxay markii ugu horreysay ka dib. Maaha in la xuso in Marvel uu soo dhexgalay si loo caddeeyo arrimaha, isaga oo si rasmi ah u sharxaya qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muransan ee ka dhasha shirqoolka - shuruucda safarka waqtiga iyo taariikhda of Captain America . Laakiin weli waxaa jira wax Marvel ay tahay inuu si sax ah u sharraxo, faahfaahinta caddayn karta inay aad muhiim u tahay in la fahmo gebi ahaanba Endgame filim ahaan iyo waxa ku xigi doona MCU.
Ku dhawaad ​​labo bilood ka hor jilaaga Tom Hiddleston ayaa arintaan u dhihi jiray Stephen Colbert the Bandhigga dambe :
Sanadihii la soo dhaafay Avengers: Infinity War iyo Avengers: Endgame, oo la sii daayay gugan, laba su'aalood ayaa la weydiiyay: Runtii Loki runti waa dhintay oo muxuu ku qabanayaa qulqulkaas? Taxanahan ayaa ka jawaabi doona labadan su'aalood.
Laakiin Hiddleston waligeed ma horumarin su'aalahan. Waqtigaas, waxaan kuu sheegnay in Marvel wuxuu doonayey inuu xaliyo labadan waxyaalood ee sirta ah laakiin waa inaan sugnaa. Ma aanan ogeyn in Marvel uu ku dhowaaqay inuu sameeyo wax aan la fileynin oo uu bixiyo wixii markii hore u muuqday nin wax dumiya, laakiin taasi waa muhiimadda ugu weyn.
Iyadoo wuxuu kuso dhowaaday Wajiga 4 isku dhafan oo ay ka buuxaan filimada iyo barnaamijyada TV-ga Disney +, madaxweynaha Marvel, Kevin Feige, ayaa qiray taxanaha Loki la xiriiri lahaa . Dr. Qadiimiga ah ee waallida badan :
Aaladda loo yaqaan 'Scarlet Witch' waxay noqon doontaa jilaa muhiim ah. filimka, iyo Feige ayaa tilmaamaya in taxanaha Loki sidoo kale waa lala xiriiri doonaa. "Ma hubo inaan hore u aqoonsanay isaga," ayuu yidhi. "Laakiin taasi waa kiiska."
Waa waxyi weyn oo ku saabsan dabeecada, maadaama Marvel ay runtii xaqiijisay dhalashada geesi geesi ah.
Loki waxaa laga yaabaa inuusan ahayn avenger si rasmi ah loo caleemo saaray, laakiin weli wuxuu yahay geesi jecel MCU. Endgame isku soo dubariday fikradda ah in dhimashadiisii ​​ugu horreysay ee Dagaalkii Infinity ugu dambeeyay. Loki oo aan fursad u helnay inaan ku aragno Endgame wuxuu ahaa nooca loo yaqaan '2012' kaasoo awood u lahaa inuu xado dhagaxa bannaan ee magaalada New York isla markaana ka baxsado, sidaasna ku abuuraya jadwal cusub oo cusub, mid ka mid ah meelaha ay dhacdooyinka daba socday dagaalkii ugu horreeyay
Waqtiga 'Loki' ee jadwalkayaga ayaa la qabtay oo dib loogu soo celiyay Asgard, sidaa darteed 2012 Loki oo xaday dusha sare ayaa ah dabeecad ka duwan, dabeecad aan wali laga arkin wejiga hore Thor. iyo saaxiibada.
Hadda Feige wuxuu xaqiijiyay in Loki uu ku laaban doono MCU uuna saameyn doono dhacdooyinka Dhakhtar 2 way iska cadahay inuu Marvel dhaqan ahaan dib u soo nooleeyay Loki qaabkii Gamora. Gamora asalka ah, Gamora-na wuxuu ku dhintay gudaha Dagaalkii Infinity markii Thanos uu allabari u galiyay gabadhiisa uu ugu jecel yahay dhagaxa nafta. Laakiin markaa, gudaha Endgame 2014, Gamora wuxuu ku socday jadwalkeena oo leh 2014 Thanos iyo ciidankiisii ​​wuxuuna ku dheganyahay qaabkan si dhab ah. Kani waa Gamora ee aan kula kulmi doonno Mas'uuliyiinta Galaxy Galaxy. 3 iyo laga yaabee filimada kale ee MCU isla isla.
Intaa waxaa sii dheer, dhab ahaantii, show TV ah Loki taasi oo aan si dhow ula xiriirin doonin inta kale ee MCU waxay noqon doontaa wax aad uga yar xiisaha. . Marka, si uun, waxaan dhammaanteen fileynay in taxanaha lagu xiriiriyo hal qaab ama mid kale.
Muujinta Feige sidoo kale waa lama huraan in la caddeeyo, mar iyo dhammaan, howlgalka safarka ee waqtiga kujira gudaha MCU. Haa, 2012, Loki wuu baxsaday, laakiin wuxuu abuuray jadwal kale oo gaar ah markii uu gacmihiisii ​​ku soo qaatay dunidan. Sidii Cape markii uu qoob ka ciyaarkan u socday oo uu u joogaa waayo-aragnimada arooska oo dhan. Mar Loki waxaa lagu abuuri doonaa 2021, waxaan sidoo kale baran doonaa wixii uu sameeyay ka dib baxsashadiisa. Runtiina aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko sida ay suurta gal u tahay inaan la kulmo Dr. Strange ama qof kale jadwalkeena. Ama sababta Strange uu u safri lahaa hal jid ama mid kale xaqiiqada Loki. Hore ugu socoshada waqtiga ama duruufaha dhabta ah waxay u baahan yihiin walxaha Pym, ka dib oo dhan.
Waa tan caddaynta in usbuucii ugu horreeyay ee Apple TV + uu ahaa guul - BGR